Angolà: Miatrika Fitsaràna Momba Ny Fanadihadihana Ny “Diamondra Mihoson-drà” Ilay Mpanao Gazety Nahazo Loka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2015 12:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Português, Deutsch, Español, 日本語, English
Ny volana lasa teo, nomena ny Lokan'ny Fitorohana ny Famerana ny Fahalalahana Miteny an'ny fanaovan-gazety i Rafael Marques de Morais, noho ny “fanaovan-gazetiny mihatra amin'ny fiainana, hafa noho ny an'ny rehetra ary ny fanadihadiana nataony tsy nisy fahadisoana” ao amin'ny firenena niaviany, ao Angolà. Rahampitso, ho tsaraina amin'ny fiampangàna maro anà fanalam-baràka melohan'ny lalàna, noho ny asany amin'ny maha mpanao gazety azy izy.
Tamin'ny kabarim-panekeny, niresaka ny finoany amin'ny ” herin'ny fiombonana” i Marques de Morais, ary nanolotra ilay loka ho an'i Eskinder Nega sy i Reeyot Alemu, ireo mpiara-miasa aminy any Etiopia, izay manefa ny saziny any am-ponja ankehitriny noho ny fampiasàn'izy ireo ny zony amin'ny fahalalahana miteny.
Mpanao gazety malaza momba ny fanadihadiana i Marques de Morais, any Angolà, efa maherin'ny roapolo taona izay, niara-niasa tamin'ireo mpampiely vaovao teo an-toerana sy maneran-tany, ho fanampin'ny vohikalany manokana an'ny fanadihadiana, Maka Angola. Ny anton'ny hitsaràna azy dia noho ilay bokiny “Blood Diamonds” (Diamondra Mihoson-drà): ny Kolikoly ary Fampijaliana any Angolà, izay nosoritana tsy sahala amin'ny asa matotra anà fanadihadiana amin'ny fanaovan-gazety fotsiny, fa asa mivaingana amin'ny fanairana ny zon'olombelona ihany koa. Milaza fanitsakitsahana ny zon'olombelona maro nataon'ireo miaramila jeneraly Angolane, tamin'ireo asa fitrandrahana diamondra ao amin'ny firenena, ilay boky, nanome fahazavana lehibe tamin'ny sehatra izay tsy dia resahina matetika amin'ny toekarena Angolane. Ho vokatr'ireo nitanterany ireo olana ireo, miatrika fitarainana fangatahana 1.600.000 dolara sy famonjàna mandritra ny sivy taona i Marques de Morais. Sazy mihoapapana ireo, noho ny fampahafantarana ireo vahoaka ny fanitsakitsahana lehibe ny zon'olombelona. Manombola ny 23 Aprily ny fitsaràna azy, ao amin'ny Fitsaràm-paritanin'i Luanda ao Angolà.
Nahatsapa ny Kaomity Miaro ny Zon'olombelona UN fa ireo fahenjanan'ireo sazy avy amin'ny fanamelohan'ny lalàna ireo dia “tsy afaka jerena ho sazy mifanaraka mba hiarovana ny filaminana na ny voninahitra sy ny lazan'ny Filoha, olona fata-bahoaka, izay araka izany, miatrika tsikeram-bahoaka sy fanoherana.”
Ny taona 2012, nametraka fitoriana mombanà heloka melohan'ny lalàna anà fanalam-baràka ny vondrona jeneraly Angolane, nitory an'i Marques de Morais, tany Portogaly noho ilay boky. Ny 11 Febroary 2013, tsy nahazo fahafahampo ireo jeneraly nametraka ilay fitoriana raharaha melohan'ny lalàna, nisafidy ny tsy hanohy ny raharaha ny Sampana Fitsaràna Portogay, nilaza fa “tsy ny hanafintohina mihitsy, fa ny hampahafantatra” ny fikasàn'i Marques de Morais. Ny volana Marsta 2013, nitondra ny raharaha fitoriana teo amin'ny ady heloka tsotra indray ireo jeneraly, tao amin'ny fitsaràna Lisbon, nangataka onitra mitentina 400.000 dolara noho ireo fanambaràna lazainy fa fanalam-baràka, natao tao amin'ilay boky.
Ny faran'ny taona 2014, namoaka lalàna ny Fitsaràna Afrikàna amin'ny zon'olombelona sy ny vahoaka, fa ireo sazy famerana dia tokony ampiasaina amin'ny fanakorontanana hita soritra amin'ny fahalalahana miteny ihany, izay mbola amin'ireo tranga tena voafetra ihany koa, sahala amin'ny hoe fiantsiana fankahalàna na fanaovana herisetra. Nilaza ihany koa io fa ireo sazy rehetra izay avy amin'ny heloka bevava, tafiditra ao ireo raharaha sivily, dia tokony ilaina tokoa ary hifanaraka amin'ilay heloka.
I Jonathan McCully ny Mpampiatrano ary Masoivoho Mpanohana ny Tetikasa amin'ny “Media Legal Defence Initiative (MLDI)(Fandraisan'andraikitra Fiarovana ireo Media amin'ny Lalàna), fikambanana mpanohana ara-dalàna maneran-tany izay manampy ireo mpanao gazety, mpitoraka bilaogy, ary ireo media tsy miankina; miaro ireo zo-ny, amin'ny fanomezana azy ireo fanampiana ara-bola ary fanohanana amin'ny tena fifandirana. I Nani Jansen no Tale Ara-dalànan'ny MLDI.